patrick chinamasa on News24
ARTICLES RELATING TO PATRICK CHINAMASA
Zim central bank chief likely to keep his job – reports
Top Africa stories: Robert and Grace Mugabe, Kofi Annan in Ghana
Zimbabwean ex-president Robert Mugabe has revealed how his 'adulterous relationship' with Grace began, and the body of Kofi Annan has received a hero's welcome upon landing in Ghana.
EU's powerhouse Germany 'to open lines of credit for Zim' – report
European Union's power house, Germany, has reportedly said that it would open lines of credit to Zimbabwe nearly 20 years after the regional bloc imposed sanctions on the southern African country.
A bloody carnage has been cleaned up after hyenas killed a kudu in reception area of a Zimbabwean safari camp, and Zimbabweans have find humour in a minister's ribbon-cutting ceremony.
PICS: Zimbabweans find humour in minister's ribbon-cutting ceremony
Social media is buzzing with the #ChinamasaChallenge after pictures of Zimbabwean Finance Minister Patrick Chinamasa "officially opening" a garbage bin in the north-eastern town of Rusape went viral.
Zimbabwe's finance minister Patrick Chinamasa has reportedly said that he "feels sorry" for "principled" ex-president Robert Mugabe as his wife Grace took advantage of his old age.
Why are we experiencing cash shortages?, Zim MPs demand answers from finance minister
Zimbabwe's Zanu-PF MPs reportedly grilled Finance minister Patrick Chinamasa during a parliamentary discussion this week for skirting questions over the on-going cash crisis and the failure to restrain illegal currency dealers.
Zimbabwe's finance minister has reportedly said that it would have been 'a crying shame' if Zanu-PF had gone to elections this year with 94-year-old Robert Mugabe as its presidential candidate.
At least 14 hyenas have killed a Kudu bull at a reception area of a luxury Zimbabwean safari camp, and Jacob Zuma reportedly warned a Zimbabwean opposition leader against joining forces with a new party linked to Robert Mugabe.
PICS: Photos of Zim finance minister 'officially opening' a garbage bin go viral on social media
Pictures of Zimbabwean Finance Minister Patrick Chinamasa "officially opening" a garbage bin at a ceremony the north-eastern town of Rusape have gone viral on social media.
Top Africa stories: Mnangagwa, Zim cash shortages, Kenya
President Emmerson Mnangagwa says heads are set to roll in his cabinet soon after elections, and the search for survivors following a dam burst in Kenya is continuing.
Murky Zimbabwe Airways deal: $100m 'vanishes in aircraft purchase', says report
The price of planes bought from Malaysia for a new Zimbabwe airline may have been inflated by up to $140 million, prompting a probe by President Emmerson Mnangagwa’s government, a private newspaper says.
Zimbabwe’s finance minister Patrick Chinamasa has reportedly said that the southern African government’s ties with their "all-weather friend" china remained intact despite revelations this week that a bulk of Chinese businessmen were found to have externalised funds.
UK optimistic over Zim future, but wants a 'free,fair vote'
Britain's foreign affairs minister Boris Johnson has reportedly expressed optimism over Zimbabwe's political future but has urged President Emmerson Mnangagwa's government to deliver "a free and fair election".